ओहो, एक बोतल पानीको मूल्य कति धेरै ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
ओहो, एक बोतल पानीको मूल्य कति धेरै !
प्रकृतिले धर्तीलाई केही अनमोल चिजले सजाएको छ, जहाँ मानिसका लागि बोटबिरुवादेखि लिएर हावा, पानी रहेका छन् । तर यो पनि सत्य हो कि, जब यी कुरा मानिसको हातमा आयो, तब यसको मूल्य निर्धारण हुन थाल्यो ।
पिउने पानीको लागि पनि मानिसहरु महङ्गो मूल्य तिर्न बाध्य छन् । यस्तै एउटा शहर हो ओस्लो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको एक रिपोर्टका अनुसार एक सर्वेक्षणमा ओस्लोमा बोतलको पानीको मूल्य १२० शहरमा रहेको औसत मूल्य भन्दा तीन गुणा धेरै रहेको छ।
तेल अवीव, न्यूयोर्क, स्टकहोम र हेलसिन्की जस्ता देशमा पनि बोतलको पानी किन्दा महङ्गो मूल्य तिर्नुपर्दछ । यस सर्वेक्षणमा भर्जिनियामा एक बोतल पानीको १ सय १५, लस एन्जिलसमा १ सय ११, न्यू आरलियन्समा १ सय ७ र सैन जोशमा एक बोतल पानीको ९० रुपैयाँ पर्दछ ।
पानीको मामिलामा ओस्लो सबैभन्दा महङ्गो शहर हो । त्यसपछि लस एन्जलस, फिनिक्स, स्यानफ्रान्सिस्को र स्यान डिएगो विश्वकै टप २० महङ्गा शहरमा पर्दछन् । ओस्लोमा १ सय २० शहरको तुलनामा पानीको मूल्य २ सय १२ प्रतिशत महङ्गो छ र बोतलको पानी अन्य शहरको तुलनामा १ सय ९५ प्रतिशतले महङ्गो छ ।